I-Pixelmator Pro ye-Mac futhi ngesigamu sentengo futhi ithembisa ukuthuthukisa umsebenzi wayo wokunqanda | Ngivela kwa-mac
Mhlawumbe imbangi enamandla kakhulu ye-Photoshop njengamanje yiPixelmator Pro.Singasho ukuthi badlala kuligi efanayo, zombili ziyahambisana neM1 futhi zombili zinezinjini zokuhlela ezinamandla kakhulu. Yize kuliqiniso ukuthi owokuqala unolwazi oluningi futhi ngokuqinisekile kungcono kakhulu, asikwazi ukungazinaki izinzuzo zePixelmator nayo manje esishiya nohlelo lwayo Isigamu sentengo nokubheja ekuthuthukiseni ithuluzi laso elidumile lokunqampula.
Ngezikhathi ezithile onjiniyela bePixelmator Pro ye-Mac, basimangaze ngezinzuzo ezithile kuzici zohlelo noma ngentengo. Kulesi senzakalo, singakusho lokho sikhuluma ngazo zombili. Kunokwehla kwentengo kanye nesithembiso esivela enkampanini esisho ukuthi esikhathini esifushane sizoba nokusebenza okusha okuzothuthukisa kakhulu uhlelo.
Hhayi eyokuqala isikhathi sinciphise intengo ngesigamu, njengalesi sikhathi. Ngakho-ke manje uma uthatha isinqumo sokuthenga lolu hlelo kuzokubiza ama-euro angama-21, 99, esikhundleni sokucishe kube ngu-44 okubiza njalo.
Kepha futhi kufanele sisho ukuthi kunguqulo elandelayo yohlelo, 2.1 sizoba nobusha obubalulekile maqondana nethuluzi lalo lokuchofoza elinikwa amandla yiMishini yokufunda. Ukusebenza okusha kuzohlaziya ukwakheka kwezithombe kusetshenziswa i-algorithm yokufunda ngomshini futhi kunikeze isiphakamiso sokuthi kungenzeka kanjani nquma isithombe ukusenza sibambe iso. Ngakho-ke okungenani kuchaziwe kusuka ku- okuthunyelwe kwebhulogi yakho.
«Ngaphezu kwakho konke, sifuna lo msebenzi ube mnandi"Abathuthukisi bathi, bengeza ukuthi uhlelo" lunikeza imibono eyahlukene ngomsebenzi ojwayelekile wokuhlela izithombe. " Azintsha kulezi zinhlaka njengoba iPixelmator Pro isivele ifaka izici zokufunda zomshini njenge Isixazululo Esikhulu, lokho kukhulisa izithombe ngaphandle kokulahlekelwa ubukhali.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Izinhlelo ze-Mac » Mac App Store » IPixelmator Pro ye-Mac futhi ngentengo uhhafu futhi ithembisa ukuthuthukisa umsebenzi wayo wokunqanda